Igcinwe kwisigwebo | Apg29
Ngalo lonke ixesha ibandla lihlala apha emhlabeni, ubabalo luyasebenza. Ngoku nabani na unokuza kuYesu aze asindiswe!
Esinye sezizathu zokuba abanye abantu bavakalise ngokungachanekanga ukuba uThixo uthumela umgwebo kukuba bavakalise umthetho. Kwaye ngenxa yalo mthetho enza isigqibo esingalunganga xa imbandezelo enkulu iya kungena.
Roma 3: 16-16. Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. 17 Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi, wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye. 18 Lowo ukholwayo kuye, akagwetywa, kodwa lowo ungakholwayo, selegwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigana loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo.
Yonke le nto isifundisa ukuba uThixo wathumela uYesu ukuba asisindise emgwebeni. Bonke abantu bagwetyiwe, kodwa bayakhululwa xa befumana uYesu. Ukuba ngenxa yesizathu esithile awufuni kwamkela uYesu, ushiyekile emgwebeni.
Umongo weBhayibhile awuthethi ukuba uThixo uthumela izigwebo, kodwa into ethethwa leli lizwi kukuba uThixo wathumela uYesu ukuba asisindise emgwebeni. Akukho bhayibhile kwaye kuyinkohliso ukubhengeza ukuba ngoku uThixo uthumela izigwebo ngubhubhane (njenge coronavirus), iimfazwe kunye neentlekele ngexesha libandla kunye nobabalo.
Umongo webhayibhile esisandula ukuwufunda utsho ngokucacileyo ukuba uThixo akazange athumele uYesu ukuba agwebe ihlabathi kodwa walisindisa.
Ewe kona, akanyanzelekanga ukuba uThixo agwebe umhlaba kuba sele kugwetyiwe! Kwaye ukuze ukhululwe kwaye usindiswe kwesi sigwebo kufuneka wamkele uYesu kwaye usindiswe.
U-Yesu uthathe nomgwebo kwaye wohlwaya xa wasweleka emnqamlezweni we-Kalvari kwindawo yethu. Ngoku ekubeni uYesu ethabathe umgwebo, sikhululwe. Kwaye sikhululwe ngokwaselukholweni kuye.
Ukuba sikhululwe ngokugwetywa kukaYesu, ke ngoko uThixo akanakusiphinda asisebenzise isigwebo. UYesu sele eyithathile!
Esinye sezizathu zokuba abanye abantu bavakalise ngokungachanekanga ukuba uThixo uthumela umgwebo kukuba bavakalise umthetho . Kwaye ngenxa yalo mthetho enza isigqibo esingalunganga xa imbandezelo enkulu iya kungena.
Ukudibanisa isibhengezo, indawo ibeka emveni kokuba kuqalile imbandezelo enkulu, engeyobhayibhile. Yile ndlela bafika kwisigqibo sokuba uThixo uthumela izigwebo ngezifo, izifo, izifo kunye neentlekele. Kodwa iBhayibhile ifundisa ngokucacileyo ukuba ezo zinto aziveli kuThixo.
Ngoku mhlawumbi umntu unokufumana igama elivulekileyo lebhayibhile kwiTestamente Endala, okanye ngandlela zonke, kwiTestamente eNtsha enokuthi ukuba uThixo usathumela izigwebo, awunakuze uyifumane into enjalo ngexesha lebandla.
Ukuba ufuna ukubabhengeza kunye nosizi, kuya kufuneka ukwenze kwenye indawo kunokuba apha Apg29.nu. Kuba apha kule bhlog yendawo, ivangeli kaYesu Krestu kunye nendlela yokusindiswa ayibhengezwa-ayisiyo mfundiso yobuxoki yokuba uThixo uthumela umgwebo kunye nosizi.
Iinguqulelo ezahlukileyo zebhayibhile zaguqule njani amaRoma 8: 1-4
KwabaseRoma 8: 1-4 Ke ngoko, akukho kugwetywa kwabakaKristu Yesu . 2 Kuba umthetho wokomoya, obusebenza ubomi bukaYesu Kristu, undikhulula nomthetho wesono nokufa. 3 Oko umthetho wawungenakukwenza, kuba kusilela kwindalo yethu yenyama, nguThixo. Xa athe wavumela unyana wakhe ukuba abe njengendoda yesono, waza wayithuma ukuba ibe lidini lesono, wasigwebela isohlwayo esile emntwini. 4 Ke ngoko, umthetho uyagwetyelwa ngokusebenza komthetho, hayi ngobomi bethu. (Bible 2000)
KwabaseRoma 8: 1 Krestu ke , akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu . 2 Kuba umthetho woMoya, unika ubomi ngaye uKrestu Yesu, wasikhulula kumthetho wesono nokufa. 3 Umthetho, usenziwa buthathaka njengoko unjalo ngenxa yesono, ubengenako ukwenza oko uThixo wakwenza ngokuthumela uNyana wakhe oyindoda enesono, njengedini lesono. Emva koko wasigwebela isono emzimbeni wakhe. 4 Ke ngoko, umthetho wokulunga, ungazaliseka kuthi, ungakhokelwa sisimo sethu senyama, ukhokelwa nguMoya. (NuBibeln)
Rom 8: 1 Ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu . 2 Kuba umthetho woMoya wobomi, ndikuKristu Yesu, undikhulula nomthetho wesono nokufa. 3 Ke loo mthetho wawungenako ngenxa yomthetho wesono, njengoko wawungenasono, wathumela unyana wakhe ukuba abe lidini lesono, ngaphandle ke kufana nomntu onesono, emzimbeni wakhe wasigweba isono. 4 Ke zona iimfuno zomthetho ziya kufezekiswa kuthi ngaphakathi kwethu esingaphili ngokwasenyameni kodwa ngokwasemoyeni. (NIV)
Rom 8: 1 Ke ngoko, ngenxa yoko uYesu wakwenzayo, bona iZenzo 7:25], ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu . 2 Kuba umthetho woMoya wobomi, ndikuKristu Yesu, undikhulula nomthetho wesono nokufa. 3 Yintoni eyayingenakwenzeka ngokupheleleyo emthethweni, kuba yayibuthathaka ngenxa yendalo eyonileyo (inyama), uThixo wayenza. Wathumela lo Nyana wakhe [kwihlabathi] njengedini lesono, kumzimba ongaphandle womntu onesono (enenyama, emzimbeni), waza wagweba isono esonweni esikuwe (ukugweba nokugwetywa kwesono esenyameni). 4 Ke ngoko iimfuno zomthetho [zesinye - zigxininisa ukuba umthetho uphela, jonga i-Roma 13: 9] izalisekiswe ngokupheleleyo kuthi esingahambiyo (siphila) ngokwemvelo yethu (yenyama) kodwa emva koMoya. (Core Bible)
Rom 8: 1-4. Ke ngoko, ngoku akukho kugwetywa kwabakuKristu Yesu , abangahambiyo ngokwenyama, abahamba ngokoMoya. 2 Kuba umthetho woMoya wobomi, ndikuKristu Yesu, undikhulule kumthetho wesono nokufa. 3 Kuba oko kungenako, emthethweni, ngenxa yokuba sasiswele amandla ngenxa yomzimba, xa athe wamthuma uNyana wakhe ngokufana nenyama enesono, nangenxa yesono, wasigweba isono esenyameni; kuthi thina esingaphili ngokwasenyameni, kodwa siphilele uMoya. (Funda)